म भ’ष्टचारी हैन ! मलाई क्या’रिकेचर गरेर फसाइयो – गोकुल बास्कोटा – Life Nepali
म भ’ष्टचारी हैन ! मलाई क्या’रिकेचर गरेर फसाइयो – गोकुल बास्कोटा
काठमाडौँ। ७० करोडको कमिशन डिलको अडियो बा.हिर आएपछि सुचना तथा सन्चारमन्त्रीबाट रा.जीनामा दि.एका गोकुल प्रसाद बाँ स्कोटाले भने उ क्त अडियो आफ्नो न भएको दा’बी गर्दै, आएका छन् । उक्त भा’इरल अडियो बा हिरिएको दिन उनी सु दुरपश्चिममा थिए । त्यतिवेला पनि उनले उ क्त अडियो आ फ्नो नभएको र ७ वटा जो डेर बनाएको होला, भनेर ह तारिएको प्रतिक्रिया, दिएका थिए । तर, तीन घ ण्टा न बित्दै उनले का ठमाडौं आउने-बित्तिकै पदबाट रा’जीनामा दिएका थिए ।
उक्त प्रकरणलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेतको नाम भ्र’ष्टाचारमा मु’छिएको छ । कतिसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले त संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिनुपर्ने माग गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको विश्वासपात्रले यस्तो कमिशनको डिल गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई थाहा भएको कांग्रेसको दा’बी छ । यदि था’हा नहुनु , भनेको पनि पाप हो भन्दै उसले यो प्र’करणलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले जतिसक्दो चाँडो जवाफको माग गरेको छ । आफ्नै पार्टीभित्रबाट पनि यो प्रकरणलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीवि’रुद्ध मो’र्चाबन्दी भएको छ ।
खासगमा उक्त अडियो विजयप्रकाश मिश्रले बाहिर ल्याएका हुन् । उनले आफूले उक्त अडियो प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको बताएका छन् । पत्रकार ऋषि धमलासँगको टिभी अन्तर्वार्तामा उनले आफूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नभेटेको र अडियो पनि नदिएको दा’बी गरेका छन् । तर, केही दिनअघिमात्रै उनले दुई महिना अघि नै प्रधानमन्त्रीकहाँ उक्त अडियो पुर्याएको समाचार जोडतोडले छापिएको थियो । यो सँगै प्रधानमन्त्री ओलीपनि यो प्र’करणमा मुछिन पुगेका हुन् ।
यता, मन्त्रीबाट हात धुनु परेका बाँस्कोटा भने त्यो अडियो आफ्नो नभएको दा’बी गर्दैछन् । स्रोतका-अनुसार उनले आफूनिकट नेता तथा का’र्यकर्ताहरु सँगको कुराकानीमा उ’क्त अ’डियो आफ्नो नभएको र क्या’रिकेचेर गरेर ब’नाईयो दा’बी गरेका छन् । नेकपाका कतिपय शीर्ष नेताहरुले पनि उनलाई फ’साईएको चर्चा गर्न थालेका छन् । यो प्रकरण अख्ति’यारले छा’नबिन गर्ने भैसकेको छ । अडियो बाहिर ल्याउने मिश्रलाई पनि प’क्राउ गरेर का’रबाही गर्न प्रहरी प्र’शासनलाई प’त्राचार भैसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटवार्तामापनि उनले उक्त अडियो आफ्नो नभएको दा’बी गरेका थिए । तर, उनको विषयमा प्रश्न उठेपछि त’त्काल रा’जीनामा दिनको, लागि प्रधानमन्त्रीले, निर्देशन दिएका थिए । बाँस्कोटा, अहिलेपनि, प्रधानमन्त्री ओलीको भ’क्तपुर बाल’कोट-स्थित् निजी निवासमा ब’सिरहेका छन् । मन्त्री हुँ’दापनि उनी त्यही घरमा ब’स्दै आएका थिए – रिपोर्टअसनेपालडट्कमबाट -साभार
Previous ओलीले कि पार्टी छाड्नुपर्छ की पार्टीको निर्णय मान्नु पर्छ -वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल
Next विनोद चौधरीको डिजाइनमा गोकुल बाँस्कोटाको अडियो सार्वजनिक भएको – खुलासा !